Filtrer les éléments par date : jeudi, 15 août 2019
jeudi, 15 août 2019 21:28
Sambava: Nirehitra ilay « Epi-Bar Vanilla » malaza eto Ambodisatrana
Setroka nanaka-danitra noho ity haintrano ity no nanaitra ny mponin’i Sambava androany alakamisy 15 aogositra 2019, tokony tamin'ny 3ora tolak'andro.
Samy nilaza ny fomba fahitany azy ny mponina teny an-toerana. Tao ny nilaza fa avy tao amin'ny efitra fatorian'ny tompontrano no nahitana afo voalohany. Misy indray ireo nilaza fa avy tao amin'ny lakozia no nipoiran’ny afo.
Nananosarotra ny famonjena noho ny tsy fananan’ny Kaominina Ambonivohitr’i Sambava fiara mpamonjy voina. Mpamojy voinan'ny Adema no nanome tanana, niaraka tamin’ny Fokonolona.
jeudi, 15 août 2019 21:26
jeudi, 15 août 2019 20:55
« Stadium » Barikadimy: Vita ny 98% amin'ny asa
Manaraka ny fenitra iraisam-pirenena sy ny fenitra takian'ny FIFA ity « Stadium » Barikadimy eto Toamasina ity. Azo andraisana ireo lalao iraisam-pirenena sy olimpika, mahazaka mpijery 15 000. Hisy « piste tartan » fihazakazahana ny manodidina ny kianja.
Vita ny 98% amin'ny asa. Natao androany alakamisy 15 aogositra 2019 ny fandraisana ara-teknika vonjimaika ny asa. Tonga teto an-toerana ny Minisitry ny tanora sy ny fanatanjahantena, Tinoka Roberto.
« Dingana lehibe no nahivatana an'izao asa izao »,hoy ny Minisitra satria « efa folo taona no namelana azy teo, nefa dia nezahina novitaina tato anatin'ny fotoana fohy ». Miantso ny rehetra ho saropiaro amin'ny zava-bita toy izao ny Minisitra mba ho lovain'ny taranaka faramandimby.
jeudi, 15 août 2019 20:28
Kolikoly, tsy fanarahan-dalàna: Zandary miisa 54 no niditra am-ponja hatramin’ny 1 febroary 2019
Hentitra ny fampanarahan-dalàna, mitsoka ny rivo-panadiovana eo anivon’ny Zandarimariam-pirenena. Atao ny fananarana sy fampitandremana fa mbola misy ireo Zandary manao ratsy, ka andraisanay fepetra, hoy ny Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimariam-pirenena (SEG), ny Jeneraly Ravalomanana Richard.
Nanambara ity farany fa Zandary miisa 54 izao no niditra am-ponja hatramin’ny 1 febroary 2019, noho ny tsy fanarahan-dalàna, kolikoly, firaisana tsikombakomba amin’ny dahalo. Hentitra ny SEG fa raha mbola misy ny Zandary jiolahy dia mbola hanatitra azy ireo amin’ny Fitsarana ny Zandarimariam-pirenena.
Mampirisika ny olona rehetra hanampy ny Zandarimariam-pirenena (034 12 005 25), miaraka amin’ny porofo, ny tenany ho fitsinjovana ny soa ho an'ny daholobe, ary hiarovana ny Voninahitry ny Zandarimariam-pirenena.
jeudi, 15 août 2019 20:24
Alarobia 27 novambra 2019: Andro tsy fiasana nefa andraisan-karama
Nofaritan’ny governemanta ho andro tsy fiasana nefa andraisan-karama ny alarobia 27 novambra 2019, androm-pifidianana Ben’ny tanàna sy mpanolontsainan’ny tanàna amin’ireo Kaominina ambanivohitra sy ambonivohitra manerana ny Nosy.
jeudi, 15 août 2019 20:23
Fifidianana Ben’ny tanàna sy ny mpanolotsaina: Ireto daty tsara ho fantatra
Hanomboka amin’ny alakamisy 29 aogositra amin'ny 9 ora maraina ka hatramin'ny alakamisy 12 septambra amin'ny 5 ora tolakandro ny fametrahana ny antontan-taratasy firotsahan-kofidiana ho an'ny kandida Ben'ny tanàna sy ny lisitry ny kandida ho mpanolotsainan'ny tanàna eny anivon'ny OVEC (Organes de vérification et d'enregistrement des candidatures).
Ny sabotsy 28 septambra 2019 (60 andro farafahatarany mialoha ny datim-pifidianana) no hamoahana ny lisitr'ireo toerana hametrahana ny birao fandatsaham-bato araka ny fanapahana horaisin'ny CENI.
Ny alatsinainy 28 oktobra 2019 (30 andro mialoha ny datim-pifidianana) no hampahafantarana an'ny besinimaro ny toerana sy ny firafitry ny SRMV (Section chargée du recensement matériel des votes) araka ny fanapahana horaisin'ny CENI.
Ny alatsinainy 28 oktobra 2019 no hanendrena ireo mpikambana amin'ny birao fandatsaham-bato hataon'ny CENI.
jeudi, 15 août 2019 20:02
Fifidianana Ben’ny tanana sy ny mpanolotsaina: Nohamafisin’ny governemanta tamin’ny didim-panjakana ny datin’ny 27 novambra 2019
Tapaka tao anatin'ny filan-kevitry ny governemanta ny 14 Aogositra 2019 fa dia hotontosaina ny 27 novambra 2019 ny fifidianana Ben'ny tanàna sy ny mpanolotsainan'ny tanàna manerana ny Nosy, araka ny tolokevitra avy any amin'ny Vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana (CENI).
Didim-panjakana telo no noraisina mba handrindrana ny fanatanterahana ny fifidianana, dia ny Didim-panjakana manaika ny mpifidy ho an'ny fifidianana Ben'ny tanàna sy ny mpanolotsainan'ny tanàna ho an'ireo Kaominina rehetra, na ambonivohitra na ambanivohitra, manerana ny Nosy.
Didim-panjakana mamaritra ny fomba hanatanterahana ny fifidianana Ben'ny tanàna sy ny mpanolotsainan'ny tanàna ho an'ireo Kaominina rehetra, na ambonivohitra na ambanivohitra, manerana ny Nosy.
Ary ny Didim-panjakana mamaritra ny fandraisana anjara ara-bolan'ireo kandida sy ny lisitry ny kandida amin'ny saram-panontana ny biletàm-pifidianana amin'ny fifidianana Ben'ny tanàna sy ny mpanolotsainan'ny tanàna ho an'ireo Kaominina rehetra, na ambonivohitra na ambanivohitra, manerana ny Nosy. Mamaritra koa ny fomba famerenana io fandraisana anjara io ho an'ireo kandida mahafeno ny fepetra.
jeudi, 15 août 2019 19:56
Andro iraisam-pirenena ho an'ny tanora: Niavaka ny fankalazana tamin’ity
Endrika vaovao sy niavaka no nentina nankalazana ny Andro iraisam-pirenena ho an'ny tanora ny 12 aogositra 2019 tao amin’ny Lapan’ny fanatanjahantena sy ny kolotsaina Mahamasina - Antananarivo, izay niompana tamin’ny lohahevitra hoe : « Tanora tsara fototra amin’ny fianarana, miantoka ny fahombiazan’ny firenena ».
Natomboka tamin’ny diabe niainga teo anoloan’ny kianjaben’i Mahamasina, nihazo ny lapan’ny fanatanjahantena ny hetsika. Nitohy tamin'ny fanentanana sy fampirantina ireo vokatra sy fikarohana izay nandraisan’ireo tanora sy ireo mpiaramiombon’antoka anjara.